Ukuqinisekisa ukhuseleko iimveliso zethu kunye nabaqeshwa - China Kingswel Oomatshini
Ekubeni coronavirus entsha ehlokomayo eTshayina, ukuya kumasebe karhulumente, phantsi abantu abaqhelekileyo, thina Kingswel Machinery kummandla kwiinkalo zonke zobomi, onke amanqanaba iiyunithi ngenkuthalo ukuthatha amanyathelo ukwenza umsebenzi omhle yothintelo bhubhane kunye nomsebenzi wolawulo.
Nangona mveliso yethu ayikho kwindawo engundoqo - Wuhan, kodwa thina musa ukukucekisa makayithabathe, ixesha lokuqala ukwenza. NgoJanuwari 27, saseka iqela uthintelo olungxamisekileyo ngobunkokheli kunye neqela impendulo ngexesha likaxakeka, waza ke umsebenzi nothintelo bhubhane mveliso ngokukhawuleza nangempumelelo yaqalisa ukusebenza. Thina ngoko nangoko wakhululwa amanyathelo okulumkela ukuqhambuka kwi website yethu esemthethweni, iqela PP, iqela WeChat, WeChat Official akhawunti, kunye platform nkqubo iindaba yenkampani. Ngexesha lokuqala esiyikhuphe ekuthinteleni coronavirus yinyumoniya novel kunye kut- anxulumene nomsebenzi ulwazi, ukubulisa imeko zabo emzimbeni wonke kunye ukuqhambuka kwidolophu yakho. Kungagqithanga suku, sagqiba amanani abasebenzi abashiya ngenxa kwidolophu lwabo ngethuba Spring Festival leeholide.
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho namnye wabaqeshwa out-of-ofisi ikhangelwe ziyifumene ityala olunye umguli nangecesina, ukhohlokhohlo. Emva koko, siya kwakhona ngqongqo kulandela iimfuno zamasebe karhulumente kunye namaqela zokuthintela bhubhane ukuba uqwalasele ukubuya kwabasebenzi ukuqinisekisa ukuba kuthintelo kunye yolawulo ndawo.
efektri yethu uthenge inani elikhulu iimaski zonyango, izibulali, kwiithemometha isikali infrared, njalo njalo, kwaye sele uqalile nebhetshi yokuqala lokuhlola yabasebenzi mveliso kunye nomsebenzi zivavanywa, lo gama iintsholongwane zonke-ngeenxa kabini ngosuku kumasebe zemveliso kunye nophuhliso kunye ofisi zezityalo .
Nangona kungekho iimpawu ukuqhambuka ezifumaneka mveliso yethu, thina kusekho zothintelo zonke-round kunye nolawulo, ukuqinisekisa ukhuseleko lwemveliso zethu, ukuqinisekisa ukukhuseleka kwabaqeshwa.
Ngokutsho ulwazi loluntu i-WHO kaThixo, iipasela ukusuka China akayi kuthwala intsholongwane. Olu qhambuko akuyi kuchaphazela kumazwe kwempahla cross-umda, ngoko qiniseka kakhulu ukufumana imveliso egqwesileyo evela eTshayina, yaye siya kuqhubeka kukunika inkonzo arcade games emva-ukuthengiswa.
Ekugqibeleni, ndithanda ukubulela abaxumi bethu namazwe angaphandle kunye nabahlobo abasoloko kamandi ngathi. Emva kokuqhambuka, abathengi abaninzi endala qhagamshelana nathi okokuqala, khawubuze kunye nokhathalelo malunga imeko esikuyo ngoku. Apha, bonke abasebenzi Kingswel Machinery Ndingathanda ukuvakalisa imibulelo yethu kakhulu onyanisekileyo kuwe!